Kusarudza mhedzisiro yezvakanakisa hakusi nyore basa. Zvakawanda zvinoenderana nekuwedzera kwakakura miedzo kunoitwa, asi chikamu chikuru chayo zvakare chinoenderana new – mushandisi. Wese munhu ane zvakasiyana zvinodiwa kana zvasvika kune virtuālais privātais tīkls (VPN) sevhisi uye seichi kana kwete, hazvisi nyore kuwana icho chakanyanya pane zvese.
Muzhinji, kunyange zvakadaro, ndapfuura nemuwandu weVPNs ndakaona kuti kune mazita mashomanana makuru akauya kakawanda uye akarongedza zvikuru zvikuru mune zvose zvinokosha. Izvi zvinosanganisira attēluzika uye kusingazivikanwi, kukurumidza uye kugadzikana, maitirwo ebasa revatengi, zvigadzirwa zvemagetsi uye zvechokwadi, zvimwe zvikamu pamwe nekusarudza kwekutengesa.
0.1 Jakanakisisa VPN cenu noteikšana Kuenzanisa & Zvirongwa Ongororo (Yakawedzerwa Kurume 2020)
1 Labākie 10 VPN pakalpojumi ye2020
1.1.1 ExpressVPN ātruma pārbaude
1.3 5. ĀtrākaisVPN
1.4 Chinokosha VPN funkcija # 2 – drošība
1.5 Galvenā VPN funkcija Nr. 4 – Nzvimbo krāpšana
1.6 Galvenā VPN funkcija Nr. 6 – Vatengi pakalpojums
3.2 3. Jakučipa VPN sevhisi
Jakanakisisa VPN cenu noteikšana Kuenzanisa & Zvirongwa Ongororo (Yakawedzerwa Kurume 2020)
Labākie PricekutemaFree izmēģinājuma serveriNetflix SupportP2P Supportmano
3,49 USD / mēn 30 mazuva 3000 + 5
USD 1,99 mēnesī 30 mazuva 3000 + 5
USD 0,83 mēnesī 10
2,42 USD / mēn 5
7,99 USD / mēn 31 mazuva 2000 + Daļēji 30 mazuva 700 + Daļēji 7 mazuva 1100 + Daļēji Mazano Anoshanda eVPN pircēji
1- NordVPN ikozvino iri kāgesa ichipa 70% mutengo – tinya apa viņaira (mazuva makumi matatu kwemaedzo).
Labākie 10 VPN pakalpojumi ye2020
Masīvs serveru tīkls
ExpressVPN ndeimwe yeyakavimbika uye inorumbidzwa mhando muVPN bhizinesi uye iri, imwe yezvisarudzo zvedu zvepamusoro. Jakavakirvas muBritu Virdžīnu salas, basa ravo rakavimbika, rakachengeteka uye rakasimba.
Kubata zvinopfuura maS3 000 munyika dziri munyika ye94 kumativi ose enyika, ruzivo rwaro rwakawanda runopa vashandisi vanobva kunenge chero nyika ipi neipi zvinokurumidza kusvika. Nyaya yezvakagadzirirwa inopa nguva yakareba uye inoratidzika, kusanganisira top-notch encryption, kuwanikwa kune zvinyorwa pane geolocation-zvigadziriswa mabasa akaita seNetflix ne BBC iPlayer uye kutsigira kweP2P faira kugovana.
Kuidasgo inotanga kubva ku $ 8.32 pamwedzi zvichienda mberi, izvo zvinosuruvarisa iri kudivi rakakwirira.
Ndakakwanisa kuwana michina yeC83 kuti iite mavhidhiyo pa ExpressVPN. Izvi hazvisi nguva dzose pane VPN dzakawanda.
Ātruma testa pārbaude kubva kuServer serveris.
Ping rate kubva kuSingapore serveris inoratidza 11 ms, iyo inofunga kuti yakanaka.
Ātruma testa rezultāts kubva kuSingapore serveris.
Iri zita rinogona kunge risinganyanyo kujairika kune vazhinji vako, asi ini pamwe ndakashamisika sezvauri kunzwa ikozvino. Izskatās, ka jums ir TorGuard vienreizējie ikhaita senge yechinyakare-chikoro uye isina kupukutwa zvakatendedza pamahedhi seedu vatatu vepamusoro pane yedu Best VPN runyorwa.
Asi huwandu hunosarudza humwe hwakasarudzwaaderti mebasa pamwe nekunakidza kushamwaridzana kukurumidza kuita izvi zviri nyore pane imwe yepamusoro sarudzo dzangu. Iko kukwanisa kugadzirisa zvinyorwa zvinyorwa zvisingaratidzi sepfungwa huru asi inobvumira vashandisi kuenzanisa kuchengeteka nekusazivikanwa maererano nezvinodiwa zvavo.
TorGuard iri kutangawo kupa ruzivo rwechizvarwa chinotevera cha WireGuard protokols, zvinoreva kuti iri kurarama pamucheto weVPN teknolojia.
Saskarne inoda zvishoma kudyidzana
Kusvibiswa-sarngeswa kwenguva refu kwezvirongwa
Inobatanidza zvinyorwa zvakadai seadblocker uye pret ļaunprogrammatūru
Hotspot vairoga plusi
Serveri ar ozonu
Veltīta P2P seva
Maseraji akaenzanisirwa sarnasderera
Zviri jaunākā kushandisa lietotne
Pros jūs IPVanish
Iva nekukwanisa kudedza mari ye VOIP
Inodzivirira pakadzika paciņa kuongororwa
Jakurudzirwa VPN kunyanya kusingazivikanwi:
Chinokosha VPN funkcija # 2 – drošība
Kubva ku šifrēšanas protokols kune yakavakwa mune akachengeteka maficha evatengi software, VPNs nhasi vanopa chengetedzo pamazinga mazhinji. Ehe, iyo inonyanya kukosha ndeye kuchengetedzwa uye kuvimbika kwekubatana kwainochengeta pakati pako neInternet kunyangwe.
Imwezve inoratidza kuti vazhinji VPN vanopa rubatsiro runopa kuchinja kwekuuraya. Izvi zvinoreva kuti chero nguva iyo kuwirirana pakati pechigadzirwa chako uye sevhareji yeVPN yakaputsika kana yakarasika nokuda kwechikonzero chipi Nechipi, muteresi weVPN achamisa eral rose rose kubva paredzētauda kana kupinda mune yako maksaa.
VPNs zvakare yakave yakapoteredza kwenguva yakakwana zvokuti mamwe mawebsite kana kunyange hurumende vane ruzivo mukuziva basa reVPN. Vatapi venhepfenyuro veVPNs vanoziva izvi uye vauyedza chimwe chinhu chinonzi Stealthing, Ghosting kana VPN Obfuscation (izwi rinotsanangura, asi rinowanzoreva chinhu chimwe chete). Izvi zvinobatsira kuvhiringidza nzira dziri kutsvaga vashandisi veVPN.
Mamwe maVPN anoenda kuhurefu hwakakura kuti abatsire vatengi vavo attēluza mazita avo uye vauya nechimwe chinhu chinonzi kaviri VPN kana yakawanda-hop. Izvi zvinoreva kuti unobatanidza kune imwe VPN server uye kubatana kwacho kunoiswa kuburikidza neimwe VPN seva usati washaya Internet. Kunze kwekubva payhiya, iyo šifrēšana yakapetwa kaviri zvakare iyo inowedzera imwe dura rekuchengetedza.
Kunze kweizvi, zvimwe zvinowanikwa zviri kuwedzerwa kune vakawanda VPN pakalpojumi nguva dzose dzakadai seMalware skenēšana, tīmekļa reklāmkarogu bloķēšana nezvimwe. Kunyange zvazvo zvose izvi zviripo, usambokanganwa chinangwa chepfungwa – kuchengeta hukama hwako hwakachengeteka uye husingazivikanwi.
ExpressVPN – Inotakura maseva anopfuura zviuru zvitatu munyika dzepasi roze, tīkls yayo yakawanda inopa vashandisi kubva kunenge chero nyika inoshamisa inosvika nzvimbo.
ExpressVPN ātruma pārbaude inobva kuAsia serverī. Ping = 11 ms, lejupielāde = 95,05 Mb / s, augšupielāde = 114,20 Mb / s (ona zvakazara ExpressVPN kudzokorora).
ExpressVPN ātruma testa mhinduro kubva kuAustralia serveris. Ping = 105 ms, lejupielāde = 89,55 Mb / s, augšupielāde = 38,76 Mb / s.
Galvenā VPN funkcija Nr. 4 – Nzvimbo krāpšana
Yeuka kuti haisi nguva dzose nezvekumhanya, asi zvakare kuwanikwa. Kana iwe uchida kufambisa Netflix US yezvinhu semuenzaniso, iwe uri kuzoda VPN ine maseva munyika iyoyo. Saizvozvo, muUK kana iwe uri kutarisa sarnasderera iBBC zviri mukati.
Kuti akunde izvi, mamwe makambani eVPN anoshandisa servera aptumšošana anyoona kubatsira mukupfuura zvimwe zvirambidzo zvepaintaneti senge network firewall. Izvi zvinovimbisa kuti VPN yako inoshanda munyika idzodzo ne cenzūra yakasimba.
TorGuard -Mhando yepamusoro yekumhanyisa matanda, kukosha kukuru, uye kusvika pakatarisana nerukova kune vakawanda ISP.
Galvenā VPN funkcija Nr. 6 – Vatengi pakalpojums
TorGuard – IMW yoakanakisisa anotsigira VPN masevhisi, inomhanya inoshanda inoshanda kutsigira vashandisi vayo (dzidza zvakawanda pasūtti Kuongororwa kwaTimote Toru).
Sezvakaitwa nemabhizimisi ose, musha weVPN une mbwa dzepamusoro uye imbwa dziri pasi mubasa revatengi. Handisi kuzotumidza kuti ivo varipi pano, asi iva nechokwadi kuti ndichavadana pane izvi mumunhu mumwe oga weVPN.
Kuti vamwe vanovimba neti biļešu pārdošanas sistēma yakaipa kwazvo, asi vangango zera kupindura. Unogona kufungidzira kugara kumba uye kuwedzera kunetseka sezvo imwe neimwe e-mail inodzoka kwauri mushure mezuva kana maviri – yeuka, iwe uri kubhadhara kune iyo rombo rekushandisa basa ravo.
Vamwe VPN vanoita sevashandi vane pfungwa iyi yekupa ‘Hupenyu hwekuita Deal’ pane yavo masevhisi. Nepo izvi zvinganzwika senge kuba kune avo iwe uchifungidzira hupenyu hweVPN 100 USD – mira ufunge nezvayo kutanga.
VPN nemasikirwo azvo zvinoda kuti makambani anyure huwandu hwemari mukuvandudza zvigadzirwa, zvigadzirwa zvemitemo, zviumbwa, pamwe nemamwe mimwe kuidasgo. Kana ivo vachizotora mari yako kamwe uye ndokupa iwe hupenyu hwekushumirwa – chii chinoitika kana dziva remari parinotanga kuoma?
Funga nezvayo se ponzi shēma, uko sevhisi yako iri kutsigirwa new sign ups ups kuchirongwa ichi. Kana chirongwa ichi chikanyanya kuremerwa kuti mari nyowani tās vēsture, inodonha. Mune emari ponzi zvirongwa zvinozoguma nekurasikirwa kwemari.
Zvikasadaro, iye anopihwa webasa anogona kupa mari yaanowana nokutengesa data rako, iro rakatonyanya pane kupa pasi pekunze masevhisi. Saka usati warova pasi kadhi rako rechikwereti kwehurongwa hwehupenyu hwese, funga nezve njodzi inogona kuvapo inogona kubuda muchirongwa chakadai. Hapana munhu anokwanisa kupa chero service yemahara.
Tese takaendako sevadzidzi; nguva dzose ipfupi pane mari uye kupinda mudambudziko. Nekuda kwekuputika kwedhijitari nemagariro ezvemagariro, kuchengetedzeka uye attēluzika pamambure kwave kuri kudikanwa kwekukurumidzira kwevadzidzi pasi rese.
Kunyangwe kazhinji kazhinji vadzidzi vangasarudza iyo yakachipa sevhisheni yakachipa, sei uzvigadzirire iyo kana yemadhora akawanda iwe waunogona likega mune imwe yeVPN yakanaka kwazvo mumusika. NordVPN inokodzera chikamu ichi zvakanaka uye mutengo padivi, inopa vadzidzi boka rose rezvakawedzera maficha.
Nharembozha yavo yekushandisa uye pārlūka pārlūks zvakare inovaita ivo vakanakira vadzidzi vari kuenda, vachibvumira basa rakachengeteka pamalaptops avo uye mafoni chero kupi pamusasa.
3. Jakučipa VPN sevhisi
Mamwe midhiya kutepfenyura masevhisi anoregedza zvemukati zvichikonzerwa nenzvimbo nekuda kwezvinhu zvakasiyana senge nyika-yakatarisana nemitemo, mitemo yekutarisira, kana zvibvumirano zvemitemo. Izveidojiet BBC iPlayer uye Netflix. Kuti uende kune izvi, basa reVPN rinobatsira asi kwete chero VPN chero ipi zvayo ichaita.
Mamwe maVPN ari nani pane mamwe, sezvo vazhinji vanongotenderera pane nzvimbo dzeva server. Iyo yakanakisisa ichashandura zvakajeka seva IPs uye ichaita mabasa e-balto list pane pane yakamborambidzwa IP. Ichokwadi, vamwe VPN vanoziva kuti havakwanise kutsigira Netflix uye vanotaura nokutendeseka kuti havakwanisi mumitemo yavo yebasa.
Iine yakanakisa kumhanya mhanyisa uye yakakura kwazvo serveru tīkls wandei, ExpressVPN uye NordVPN vangangodaro vaviri akanakisa mubhizinesi rekutepfenyura midhiya kubva kwakawanda zvinyorwa – kwete Netflix chete. Iyo inomhanyisa inogona kubatirira neore nyore kune HD vhidhiyo uye Netflix iri zvechokwadi iri pamusoro wevanhu vazhinji ‘inoda’ rondedzero.
Vamwe vako vanogona kunge vakanzwa kuti maVPN anoita kuti P2P faira igoverane (Kuchinjika) nekukurumidza asi izvo hazvisi zvechokwadi. Chii chiri chokwadi hazvo ndechekuti kudanha murwizi kune dzimwe nyika kunogona kukuita kuti ubatwe nema faindi akakosha kana kunyange nguva jejere kana ukabatwa uchidurura zvinhu zvisiri izvo.
Muzviitiko zvakawanda kunewo veInternet pakalpojumu sniedzējs vanokanda mafashama kubva pavanoti P2P fava vanogovana vari kudya yakawanda yebhendwidthwip iripo .Izvi zvinowanzoitika mukukanda, kudedza kukurumidza kwevashandisi veP2P.
VPN jakanaka – seTorGuard, ikhakubatsira kuti utendere kupfuura nemafashama nema ISP. Muchokwadi, kana uchishandisa VPN kukurudzira, yako ISP haizomboziva kuti uri kufambisa mvura.
Isu tinoshandisa sangano rinobatanidzwa munyaya ino. WHSR inowana mari yekutsvaga kubva kumakambani anotaurwa munyaya ino. Maonero edu anobva pane zvakaitika chaizvo uye chaiyo sevha dati.
Кусарудза мхедзизиро йезваканакиса хакуси нёре баса. Звакаванда звиноэндерана некуведзера квакакура мидзо куноитва, аси чикаму